Mac Disk Recovery Software - Hel Back Data ka Hard Drive on Mac
> Resource > Mac > Hel Back Data ka Hard Drive la Mac Disk Recovery Software
Qof kasta waxaa laga yaabaa in la kulmo dhibaatada laga badiyay sawiro muhiim ah, waraaqaha dhaqaale ama emails aad drive Mac adag. Sidaas waxaa aad u weyn lagu talinayaa in dib dhan waraaqaha muhiimka ah si joogto ah. Waa habka ugu sahlan tahay in aad dib u hesho macluumaadka haddii aad ula kac ahayn, waa lumin. Laakiin mararka qaarkood aad illoobi karaan in aad nuqulka files ku drive adag, ma daaliya, Mac Disk Recovery Software waxaad badbaadin kartaa ka badiyay waraaqaha muhiimka ah.
Dadka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in qaab disk si ay u habayn iyo baaxadda maqaal qoruhu disk ama kaliya tirto faylasha loo baahnayn ee drive adag. Sida ay jiraan files kala duwan ee disk ah, Oo dhib bay cadeynayaa karaan faylasha kuwaas oo waxtar leh ama aan. Ka dib markii formatting ama la tirtiro, si kediso ah ayay heleen in files yihiin waxtar leh oo u baahan in ay u arkaan dambe, ka dibna ay isku dayeen in ay ka heli dib files lumay, ama haddii kale ay u leeyihiin in ay dib uga bilowdo shaqada iyo ku qaataan isbuucaan oo dhan si ay u ogalanaya, ama waayi doonaan files muhiim ah si joogto ah. Xitaa waxaad ku waayi kartaa xogta ee cajaladaha Mac sabab u virus ama weerar furin. Halkan yimaado su'aasha markaas: sida dib u soo ceshano xogta lumay ee cajaladaha Mac?
Talaabooyinka inuu ka soo kabsado aad drive Mac adag laga badiyay xogta:
Marka hore download Software Mac Disk Recovery - Wondershare Data Recovery for Mac .
Waxaa jira saddex hababka si aad u doorato oo ku salaysan xaaladaha kala duwan. Halkan waxaan ku qaadan "masaxay Recovery File" tusaale ahaan.
Talaabada 1: Dooro drive ee macquul adag
Fur aad Software Recovery Disk u Mac, iyo riix "masaxay Recovery File" ee ay shaashadda ugu weyn. Dooranaysaa disk meesha files lumay ahaayeen iyo bilaabaan in ay iskaan adigoo riixaya "scan" button. Waxaa soo kaban karto, faylasha lumay ka drives dibadda adag oo USB flash drives iyo sidoo kale Macintosh disk adag.
Talaabada 2: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan faylasha lumay ee Mac drive adag
Ka dib markii iskaanka, aad arki doonaa liiska dhammaan faylasha recoverable aad disk loo qoondeeyey. Halkan ka Mac Disk Recovery Software taageertaa shaqada Falanqeynta dokumentiga, sawiro iyo kaydka. Soo qaado baaritaan sanduuqa oo ka mid ah files lumay oo aad doonaysid in aad ka bogsanayaan oo guji "Ladnaansho".
Fiiro Gaar ah: Wixii soo kabashada file tirtiray, waxa uu tashiilo waqtiga si aad u hufan ka raadi files tirtiro magaca by fursadaha filter bixiyo software ah.
Talaabada 3: Dooro waddada dib u soo kabashada si loo badbaadiyo files ka dib markii a
Ku qor ama dooro meel meesha aad rabto in lagu badbaadiyo files bartilmaameedka, ka dibna riix badhanka "Save". Haddii drive ay adag tahay in aad laga badiyay files ayaa overwritten by files cusub, uma Dhawa inuu aad u soo kaban karo software ah soo kabashada xogta, sidaas darteed waxaan ku talinaynaa in aad heer sare ah si loo badbaadiyo files ee drive ka duwan ilaha drives.
Halkan waxaa ah, ugu dambeyntii aad files lumay dib ugu wada mar kale!